Project K အဖွဲ့ဖျော်ဖြေမှုကိစ္စ အကုသိုလ် မဖြစ်ကြောင်း သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန ထုတ်ပြန် - MM News
ရွှေတိဂုံစေတီတော်ပုံရိပ်ပေါ်တွင် Project K အဖွဲ့ဖျော်ဖြေမှုကိစ္စ “စေတနာဆိုး – အကုသိုလ်စေတနာ မရှိသည်မှာ ထင်ရှား” ဟု သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန ထုတ်ပြန်…
“ရွှေတိဂုံစေတီတော်ပုံရိပ်ပေါ်တွင် Project K အဖွဲ့ဖျော်ဖြေမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အဂါရဝ – စေတနာ ဖြစ်/မဖြစ် လေ့လာသုံးသပ်ချက်” တစ်ရပ်ကို သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီဌာနက ယနေ့တွင် ကြေညာလိုက်သည်။
၁။ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံတွင် ရက်သတ္တပတ် လေးပတ်အကြာ လေ့ကျင့် သင်ကြားနိုင်ရန်နှင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာလတွင် ကျင်းပရန် စီစဉ်ထားသည့် အာရှသီချင်းများ ဖျော်ဖြေရေးပွဲတော် (Asia Song Festival) ၌ Project K အဖွဲ့ ဖျော်ဖြေခွင့်ကို တရားဝင် ဖိတ်ကြားခြင်းခံခဲ့ရပါသည်။
၂။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံတို့၏ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု သည် ကာလရှည်ကြာစွာ လေးနက် ခိုင်မြဲလျက်ရှိပါသည်။ Project K အဖွဲ့ကို ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံက ဖိတ်ကြားသည့် အချိန်ကာလသည် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်၌ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကပ်ရောဂါကြောင့် တစ်နိုင်ငံနှင့် တစ်နိုင်ငံ ကူးလူးဆက်ဆံမှုများကို ကန့်သတ် ဆိုင်းငံ့ထားသည့် ကာလ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအချိန်ကာလမျိုးတွင် COVID-19 နှင့်ပတ်သက်သည့် သတ်မှတ် စည်းကမ်းချက်များ အတိုင်း ဆောင်ရွက်၍ Project K အဖွဲ့အား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံ အတွင်း ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုပြီး အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်နေ့အထိ လေ့ကျင့်ရေးကာလနှင့် ဖျော်ဖြေရေး ကာလအတွင်း လေယာဉ်စရိတ်၊ သွားလာနေထိုင် စရိတ်၊ စားသောက်စရိတ်အပါအဝင် ကုန်ကျစရိတ် အားလုံးကို ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံက ကျခံ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
၃။ ရွှေတိဂုံစေတီတော် ပုံရိပ်ပေါ်တွင် Project K အဖွဲ့က ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဝေဖန်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။ ယင်းအဖွဲ့ကလည်း Rehearsal ၂ – ကြိမ်ပြုလုပ်ရာတွင် အဆိုပါ ပုံရိပ် မပါဝင်ခဲ့ကြောင်း၊ အမှန်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်သည့် အချိန်မှသာ ယင်းပုံရိပ်ကို အသုံးပြုကြောင်း၊ ဖျော်ဖြေ တင်ဆက်နေစဉ်အချိန်အတွင်း ယင်းရွှေတိဂုံစေတီတော်ပုံရိပ် မိမိတို့၏ အောက်ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် ကျရောက်နေသည်ကိုလည်း မသိရှိပါကြောင်း၊ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ပြီးမှသာ သိရှိကြရသဖြင့် စိတ်ဆင်းရဲ ကြရပါကြောင်း၊ မသိရှိသည်ကို ပြုမိမှားသဖြင့် သည်းခံခွင့်လွှတ်ကြပါရန် နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် အနူးအညွတ် တောင်းပန်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
၄။ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ အဆုံးအမဒေသနာတော်တွင် မည်သည့်ကုသိုလ်အမှုနှင့် အကုသိုလ် အမှုကို ပြုသည်ဖြစ်စေ ပြုလုပ်ရန် နှိုးဆော်တိုက်တွန်းသော စေတနာသည်သာ ကမ္မ= ကံ ဖြစ်ကြောင်း ညွှန်ပြထားပါသည်။
ယင်းကို “စေတနာဟံ ဘိက္ခဝေ ကမ္မွံ ဝဒါမိ” ဟူ၍ သုတ္တန်၊ ဝိနည်း၊ အဘိဓမ္မာ – ဒေသနာတို့တွင် နေရာအနှံ့ ဖော်ပြထားပါသည်။
(အညွှန်း = အံ၊၂၊၃၆၃ ။ အဘိ၊ က၊ ၂၉၀၊ အဘိ၊ ဋ္ဌ။ ၁၊ ၁၃၀။ မ ၊ဋ္ဌ၊ ၃၊ ၃၈)
၅။ ဓမ္မပဒဒေသနာတော် – စက္ခုပါလမထေရ်ဝတ္ထုတွင် မျက်မမြင်ဖြစ်သော ရဟန္တာစက္ခုပါလ မထေရ်သည် တရားရှုမှတ်ရင်း စင်္ကြန်လျှောက်ရာ၌ ပိုးကောင်ငယ်များကို နင်းမိသေကြေကြသဖြင့်
အခြားရဟန်းများက မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလျှောက်ထားရာ ဘုရားရှင်က သေစေလိုသော စေတနာဖြင့် သတ်ဖြတ်ခြင်းမဟုတ်သောကြောင့် ဝိနည်းအာပတ်မသင့်ဟု ဆုံးဖြတ်တော်မူသော သာဓက အထင် အရှားရှိပါသည်။
၆။ Project K အဖွဲ့ဝင် ဖျော်ဖြေသူများသည် Rehearsal ပြုလုပ်သည့်အချိန်က အဆိုပါ စေတီတော် ပုံရိပ်မပါဝင်ကြောင်း၊ ဖျော်ဖြေပြီးမှ သိရှိရကြောင်း၊ သိရှိရသည့်အချိန်တွင် လွန်စွာ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရ သဖြင့် တောင်းပန်ပါကြောင်း- ဖော်ပြထားသဖြင့် စေတီတော်ပုံရိပ်ကို နင်းခြေလိုသော စေတနာဆိုး – အကုသိုလ်စေတနာ မရှိကြောင်းထင်ရှားပါသည်။
၇။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အချို့စေတီတော်များ၌ ညနေပိုင်းအချိန်တွင် ဖူးမြော်လာကြသော ဘုရားဖူး အားလုံးသည် အနောက်အရပ်မှ နေရောင်ထိုးသောကြောင့် အရှေ့အရပ်၌ ဖြစ်ပေါ်နေသော စေတီတော် ပုံရိပ်တွင် နင်းလျှောက်ကြရသည်ချည်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ မည်သူမျှ အကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်ကြပဲ စေတီတော် ကြီးကို ကြည်ညိုသဒ္ဓါဖြင့် ပူဇော်ရှိခိုးကြပါသည်။
၈။ စီစဉ်သူများအနေဖြင့်လည်း ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီးသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထင်ရှားသော ပုံရိပ် (အမျိုးအသားအထိမ်းအမှတ်သင်္ကေတ – National Land Mark) ဖြစ်သောကြောင့် ဖျော်ဖြေ တင်ဆက်သူများသည် မြန်မာနိုင်ငံသားများဖြစ်ကြောင်း သိစေလိုသဖြင့် ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကို LED Display Board ဖြင့် ဖော်ပြဖန်တီးခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ယူဆရပါသည်။
၉။ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်သူများသည် စေတီတော်ပုံရိပ်ကို မသိရှိခြင်းကြောင့် ဆက်လက် ကပြ ဖျော်ဖြေခြင်းဖြစ်ပြီး အကုသိုလ်စေတနာမဖြစ်သဖြင့် သည်းခံခွင့်လွှတ်ရန် လုံလောက်သော အကြောင်း ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ ကိုယ်တိုင်ကပင် အနူးအညွတ်တောင်းပန်ထားသဖြင့် ယင်းကိစ္စကို အကြောင်းပြုလျက် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အားလုံး အကုသိုလ်မတိုးပွားသင့်ပါကြောင်း သုံးသပ်တင်ပြအပ်ပါသည်။
၁၀။ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံနှင့် နှစ်ကာလရှည်ကြာ ချစ်ကြည်ခိုင်မြဲစွာ ဆက်ဆံခဲ့သည့် မိတ်ဆွေကောင်းပီသသည့်နိုင်ငံ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံနှင့် ကိုရီးယားသမ္မတ နိုင်ငံတို့အနေဖြင့် ခိုင်မြဲစွာရှိပြီးဖြစ်သော နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေး အဓွန့်ရှည် တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးကိုသာ အဓိကထား ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
Selv om bivirkninger av Tadalafil viser seg i mindre form, denne fungerer på en svært presis måte ved å øke blodtilførselen inn i penis ved seksuell stimulanse. Men er utvilsomt billigere enn originalen fra Pfizer eller som selges under et annet navn. Og vi vil levere et mirakel narkotika til ditt hjem, vi forventer at dette info å være nyttig og interessant Kamagra Oral Jelly 100mg for deg.
သူမအားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြစ်တင်ဝေဖန်နေတဲ့ ပရိသတ်ကို ပညာသားပါပါ ပြန်လည်တုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ မေကဗျာ